Atletico Madrid oo kooxaha Liverpool iyo Chelsea kula dagaalamaysa saxiixa David Neres – Gool FM
(Madrid) 22 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa la soo warinayaa inay ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Ajax ee David Neres inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Neres ayaa dhaliyey 12 gool, waxaana uu dhiibay ama caawiyey 15 gool oo kale 50 kulan oo uu u saftay kooxda Ajax intii lagu guda jiray xilli ciyaareedka dhawaan dhammaaday ee 2018-19.
Kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa labadaba la la xiriirinayaa inay u dhaqaaqi doonaan xagaagan saxiixa 22-sano jirkaan.
Sida ay warinayso Jariiradda AS ee ka soo baxda dalka Spain, kooxda Atletico ayaa sidoo kale qosheynaysa inay heshiis la gaarto xiddigan xulka qaranka Brazil, kaasoo fure u ahaa kooxda Ajax ee ku guuleystay horyaalka dalka Holland, isla markaana soo tiigsatay afar dhammaadka tartanka Champions League.
Atletico Madrid ayaa la filayaa inay suuqa mashquul ku noqon doonto xagaagan, maadaama ay doonayso bedelka booska uu ka baxayo Antoine Griezmann kaasoo la malaynayo inuu 100 milyan oo gini kaga bixi doono garoonka Wanda Metropolitano oo uu ku biiri doono kooxda Barcelona.
Neres, kaasoo kulankii ugu horreeyey u saftay xulkiisa qaranka Brazil bishii Maarso ayaa kooxda Ajax kaga soo biray naadiga Sao Paulo bishii Janaayo sanadkii 2017-kii.